FLAC bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu formats nke na-n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma audio mgbasa ozi ọma dị ka video àgwà n'ime kacha nta na o kwere omume ohere ọ na-ewe jidesie na diski ike. E nwere ọtụtụ iri puku ndị omume nke na-ahụ na ọ format a na-akwado na njirimara ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na nke a na-enweghị converting Ọkpụkpọ ma dị mwute ikwu ka mbipụta-erukwa na a nkuzi e dere iji jide n'aka na ndị nile dị otú mbipụta na-kpebiri na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọgwụgwụ results.
Part 1: Gịnị bụ FLAC?
Part 2: Gịnị Windows Media ọkpụkpọ nwere ike agaghị akpọ FLAC?
Nkebi nke 3: Wụnye FLAC codec
Nkebi nke 4: tọghata FLAC ka windows Media Player dakọtara format
FLAC ma ọ bụ free lossless audio codec bụ ihe audio codec nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na mmekọrita ọdịyo formats na-egwuri iji dị iche iche egwuregwu. Ọ bụkwa otu n'ime codecs na-arụ na nke kacha mma n'ụzọ na-emekwa ka n'aka na size nke faịlụ na-abịakọrọ na ọ na-belata 50% mgbe ha na-converted na iji FLAC usoro. FLAC bụ a na-emeghe isi software nke nwekwara a free nkesa na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma e nyefewo ha n'aka na oge na onye ọrụ mgbe chere ihu ụdị ọ bụla nke nke mgbe ọ na-abịa metadata geo na ngwa ngwa na-achọ. The n'ozuzu arụmọrụ nke FLAC format bụ naanị-akwado site na ihe ndị kasị elu media egwuregwu ma na FLAC codec na-erughị elu Player nwekwara ike-arụnyere jide n'aka na faịlụ Ọkpụkpọ na-akwado na ala na afọ ojuju. Na nkenke a Ọkpụkpọ na-ukwuu akwadoro maka nchekwa na njem nke media na ala.
Windows Media Player bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe omume nke na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi results mgbe ọ na-abịa dị iche iche formats na-emekwa ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe omume na-nwekwara arụnyere na nke a nke na-akwado dị iche iche formats. Ọ bụ ezie na Windows Media Player na-akwado fọrọ nke nta 50+ formats maka ịkpọ ma mwute ikwu na ọ bụghị e ahazi ndabara na-eme ka n'aka na FLAC format na-egwuri na nke a bụ otu n'ime ihe ndị na-eduga a nke. N'aka nke ọzọ akpachara ma ọ bụrụ na ọrụ adịghị wụnye mkpa FLAC codecs na-egwu faịlụ mgbe ahụ ọ na-aghọ ihe nke abụọ mere iji jide n'aka na nke bụghị e kpebiri. N'ihi ya a bụ abụọ kasị nkịtị mere ka na-eme ka n'aka na FLAC format na-adịghị egwuri site Windows Media Player na ya mere nke a nkuzi e dere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a.
-Esonụ na-abụọ kasị eji na elu FLAC codec maka Windows Media Player nke na-n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na mmekọrita na-akpọ FLAC faịlụ na WMP:
FLAC akwụkwọ mepụtara XIPH na hụrụ na URL http://www.xiph.org/dshow/
FLAC codec mepụtara site na Isi Iyi forge ịchọta ke URL http://sourceforge.net/projects/flac/?source=navbar
The nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu iji wụnye FLAC codec si http://www.xiph.org/dshow/ e kọwara dị ka ndị a:
1.The onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na http://www.xiph.org/dshow/ URL a gara ibudata exe faịlụ dị ka kwa usoro version
2.The faịlụ ndị ahụ ga-azọpụta desktọọpụ:
3. Onye ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ijide n'aka na exe faịlụ a pịrị mere na echichi malitere, sị:
4.The onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na kpaliri na-soro na echichi na dechara. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na usoro a na restarted ka codec ga-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na usoro Malitegharịa ekwentị e mere zuru ezu na a ọkachamara n'ụzọ. Nke a na-n'egosi ọgwụgwụ nke usoro na zuru na onye ọrụ ahụ ga-enwe ike ịdị na-egwu FLAC faịlụ site na iji windo media ọkpụkpọ.
Ọ bụ nnọọ kacha ụzọ nke a onye ọrụ kwesịrị gaa na ọ na-emekwa ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe results na-enwetara na nke a mmekọrita. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma amụọ enweghị ihe ọ bụla nke na mma convertor na-arụnyere na n'elu usoro na ahụ ga-enyere onye ọrụ iji jide n'aka na ọ bụrụ na e a abụọ oge mgbe ahụ onye ọrụ ga-aga n'ihi ndị kasị mma convertor na-akpaghị aka na aha a dị oke egwu mepụtara bụ Wondershare Video Convertor Ultimate. Usoro ihe omume na-eme ka n'aka na 150+ formats na-akwado na site na iji convertor akakabarede si 2D ka 3D bụkwa ekwe omume nke mere na onye ọrụ nwere ike nweta ihe kasị mma na ndị ọkaibe na-arụpụta mgbe ọ na-abịa na ezigbo ikiri. Na-esonụ bụ usoro a ga-soro na nke a.
1.The URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html bụ ka a bịa na iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na ihe omume faịlụ ebudatara, arụnyere na na na usoro ihe omume na-agba ọsọ :
2. The faịlụ ndị ahụ na-kwukwara site ọkụkụ tinye faịlụ bọtịnụ na Ihuenyo nke usoro ihe omume:
3. The FLAC faịlụ bụ mgbe ahụ ka converted ka format na-akwado site na Windows Media Player na nke a nwere ike họọrọ si nri panel nke usoro ihe omume dị ka e gosiri na foto n'okpuru:
5.The onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na faịlụ bụ n egwuri na iji Windows mgbasa ozi ọkpụkpọ nke ga-ahụ na egwu enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu:
FLAC XIPH Malfunctions mgbe ụfọdụ Adịghị mfe na niile
Wondershare Video Convertor Ultimate Ofụri Esịt anụ na otu ebe Dị mfe
Wondershare Video Convertor Ultimate bụ ihe kasị mma na ngwá ọrụ dị ka kwa table n'elu na-eme ka n'aka na FLAC format na-egwuri dị ka kwa onye ọrụ mkpa na ọchịchọ. Ihe mere na-kọwakwuru ka n'okpuru:
Wondershare Video Convertor Ultimate bụ ihe kasị anụ omume ka tụnyere ndị ọzọ omume nke yiri genre na ọ bụ n'ihi na eziokwu na ụlọ ọrụ na nke a na-ahụ na ndị kasị mma na ndị kasị uchu Filiks na-soro iji jide n'aka na usoro ihe omume dị wee na-ruo ụbọchị na nkà na ụzụ na ọnọdụ.
Wondershare Video Convertor Ultimate dịkwa nnọọ mfe iji okirikiri nhọrọ ukwuu na usoro nkwado dị ka mma. Ọnyịnye nke dị iche iche na ngalaba bụ ụzọ kasị mma iji hụ na onye ọrụ onye bụ ihe ọhụrụ ka usoro ihe omume nwere ike ịrụ ọrụ ya na-enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
> Resource> WMP> 2 ụzọ na-egwu FLAC na Windows Media Player